သတ္တဗေဒဌာန သတင်း ၁
သတ္တဗေဒဌာန သတင်း ၂
သတ္တဗေဒဌာန သတင်း ၃
မြစ်ကြီးနား ၊ ကချင်ပြည်နယ် ၊ မြန်မာ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် သုတေသနဂျာနယ် အတွဲ ၁၀၊ အမှတ် ၁ နှင့်အမှတ် ၂
MISCC 2019 Conference Proceedings Vol. 1, No. 1, No. 2, No. 3, No. 4
ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်အသင်း ၏ မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲ နှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲ
English Badminton Team
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် လူငယ်များ၏ တန်ဖိုးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲညီလာခံအခမ်းအနားအစီအစဉ်
Copyright © Myitkyina University 2019. All rights reserved.Powered by Autumn Technologies